Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Nin Dhalinyaro ah oo Hooyadiis iyo Aabihiis ku dilay Baangad oo la baadi goobayo
August 18 2017 15:34:19
Nin Dhalinyaro ah oo Hooyadiis iyo Aabihiis ku dilay Baangad oo la baadi goobayo
Nin dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Kenya , ayaa lagu soo waramayaa in uu si xun u dilay Hooyadiis iyo Aabihiis kadib markii ay ku murmeen dhaqaale ay reerkaasi lahaayeen.
Muranka ayaa yimid kadib markii Hooyada iyo Aabaha dhalay ninkan dilka geestay ay iibiyeen dhul ay lahaayeen si lacagta dhulkaasi laga bixiyay ay jaamacad ugu dhigato gabar 19-sano jir reekaasi ka dhalatay oo gaartay Waxbarasho Jaamacadeed.
Ninka dilka geestay oon wali magaciisa la shaacin ayaa ka codsaday hooyadiis iyo aabihiis in lacagta dhulka laga bixiyay isaga la siiyo si uu ugu shaqeesto, hasa ahaatee waxaa arintaasi diiday labada waalid ee nikaasi dhalay.
Markii uu fashilmay qorshihii uu lacagta ku doonayay ninkan ayaa isaga oo careesan waxa uu cabay qamri badan waxa uuna kadib kusoo laabtay gurigooda isagoona Baangad af badan oo gurogooda taalay ku dilay hooyadiis iyo aabihiis.
Ninka falkan dilka ah u geestay waalidiintiisa ayaa ku jira baxsad, waxaana baadi goob ugu jira ciidamada booliiska Degmada Kericho uu falkan ka dhacay, waxa ayna ciidamada ka codsadeen dadka deegaanka in ay kusoo wargaliyaan ninkaasi hadii ay arkaan.
Dalka Kenya ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca dhacdooyin aad looga naxo, waxaa sanadkan kaliya dalkaasi laga diiwaan galiyay dhoor dhacdo oo dil horseeday ayna isku geesteen dad ehel iyo kuwa xariir wadaag ahaa.
· mamaan on April 26 2016 ·